कुश्मा नगरपालिकाको खुर्कोटमा पहिरोले पुराएको क्षतिको सांसद गिरी सहितको टोलीद्धारा निरिक्षण – Parbat News
३० भदौ, पर्वत । अविरल बर्षातका कारण जिल्लाका धेरै बस्तीहरुमा क्षति पुगेको छ । पहिरो र बाढिका कारण कयौ वस्तीहरु उच्च जोखिममा परेका छन् । कतिपय वस्तीहरु स्थानान्तरण गर्नुपर्ने अवस्थामा छन् भने कतिपय घरहरु तत्कालै भत्कने अवस्थामा पुगेका छन् ।
यसैवीच प्रतिनिधि सभाका सांसद पदम गिरी सहितको टोलीले बाढि र पहिरोले भत्काएको बस्तीको निरिक्षण गरेको छ । कुश्मा नगरपालिका वडा नं. २ को पहिरो पहिरो ग्रस्त क्षेत्रमा जिल्ला समन्वय प्रमुख मनोहर बि. पौडेल, प्रमुख जिल्ला अधिकारी सम्भुप्रसाद रेग्मी, नेकपा जिल्ला सचिब सुदिप कुँवर, नेकपा नेता गोबिन्द पहाडी, शंकर गिरी, ईश्वर गिरी लगाएका प्रतिनिधिहरु सहभागीहरु थिए ।
निरिक्षणमा पर्वत उद्योग बाणिज्य संघका अध्यक्ष केदार शर्मा, सशस्त्र प्रहरी बल चण्डीका गणका गणपति,जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्वतका प्रमुख विश्वराज अधिकारी, सप्रजिअ बिमल गौतम लगाएतको सहभागीता थियो ।
उक्त टोलीले खुर्कोटका विभिन्न वस्तीमा बर्षातका कारण भएको क्षतिको निरिक्षण गरेको थियो । पहिरोबाट उच्च जोखिममा रहेका घर र वस्तीहरुको संरक्षणका लागि तत्काल पहल गरिन सांसद गिरीले बताए । जिल्ला दैविक विपद् ब्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष समेत रहेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत उनीहरुको उचित ब्यवस्थापनका लागि पहल गर्ने उनको भनाई छ ।
बर्र्षात निरन्तर भइरहँदा अधिकांश घरहरु चर्किएका छन् । घर माथिबाट पहिरो खस्दा घरहरु उच्च जोखिममा परेका छन् । बर्षातका कारण कतिपय वस्तीको भुगोल चर्किएको छ । बर्षातले खाल्डो परेका छन् भने कतिपय घरहरुमा बस्न निकै जोखिमपूर्ण बनेको छ ।